Video:-Erdogan“Ma yaqaanaan siyaasada ama diblomaasiyadda caalamiga ah. Kuwani waa dhaqankii Nasiyiinta, waana Fajiistiyaal,” – Idil News
Video:-Erdogan“Ma yaqaanaan siyaasada ama diblomaasiyadda caalamiga ah. Kuwani waa dhaqankii Nasiyiinta, waana Fajiistiyaal,”
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dowladda Dutch-ka ku dhaleeceeyay go’aanka ay ugu diiday in ay dalkeeda ka degto duyuurad sitay wasiirka arimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu.
Hadalkan ayuu ka sheegay madaxweyne Erdogan xaflad caleemo saar oo maanta oo Sabti ah ka dhacday magaalada Istanbul, isagoona xaqiijiyay in duyuuradda uu la socday Mr. Cavusoglu laga hor istaagay in ay caga dhigato dalka Netherland.
“Sidee duulimaadyada diblomaasiyiintiina ku imaan karaan halkan kadib markii aad wasiirkeeda arimaha dibadda u diideen ogolaansha?” ayuu Erdogan su’aalay madaxda Dutch.
“Ma yaqaanaan siyaasada ama diblomaasiyadda caalamiga ah. Kuwani waa dhaqankii Naziyiinta, waana Fajiistiyaal,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Wasaaradda arimaha dibadda ee Dutch ayaa horey u sheegtay in ay is hor istaag ku sameysay duyuuradda uu la socday wasiirka arimaha dibadda ee dalka Turkiga, Mevlut Cavusoglu in ay ka degto dalka Nertherlands taas oo ay sabab ugu dhigeen amniga iyo bad qabka dadweynaha.
Mevlut Cavusoglu, oo ah wasiirka arimaha dibadda ee Turkiga ayaa sida uu qorshaha uu ahaa waxaa lagu waday in uu khubad u jeediyo jaaliyadda Turkiga ee ku dhaqan magaalada Rotterdam ee dalka Nertherland.
Wareysi uu siiyay TV-ga CNN Turk ayuu wasiirka arimaha dibadda ku sheegay in haddii Netherlands ay is hor istaag ku sameyso booqashadiisa, ay wajahi doonto cunaqabateyno adag oo saameeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalkaas.
Dhowr munaasabadood oo ay aheyd in ay ka qeybgalaan saraakiil ka tirsan xisbiga talada Turkiga haya ee AKP oo dalka Jarmalka lagu qaban lahaa ayaa laga joojiyay taas oo dowladda Jarmalku ku sababaysay amniga dartiis.
Ku dhowaad 1.5 milyan oo muwaadiniin Turki ah ayaa ku nool dalka Jarmalka kuwaas oo xaq u leh in ay ka qeybgalaan aftida loo qaadayo dastuurka Turkiga oo isbedel dhanka awoodaha madaxweynaha lagu sameeyay.
Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay in talaabadan ay qaatay Barlin ay tahay mid tusaysa in Jarmalku wali baaqi ku sii yahay dhaqankii Naziga,hoos ka daawo muuqaalka.
Be the first to comment on "Video:-Erdogan“Ma yaqaanaan siyaasada ama diblomaasiyadda caalamiga ah. Kuwani waa dhaqankii Nasiyiinta, waana Fajiistiyaal,”"